स्कटिसको अनुसन्धानमा नेपालीलाई अवार्ड | EuropeNepal.Net
स्कटिसको अनुसन्धानमा नेपालीलाई अवार्ड
Nepali awarded in Scottish
घरबारबिहीन स्कटिसहरुको स्वास्थ्यबारे उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने नेपालीसहितका खोजकर्ताले अवार्ड जितेका छन् । रोबर्ट गोर्डन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापनमा संलग्न प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. विभु पौडेलले विजेता समूहको तर्फबाट एनएचएस स्कटल्याण्ड अवार्ड ग्रहण गरे ।
कुल ५९ प्रिजेन्टेसनमध्ये रोबर्ट गोर्डन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुको समूह र एनएचएस ग्राम्पियन कर्मचारीले ‘पर्सन सेन्टर्ड केयर’ क्याटेगोरीमा अवार्ड जितेका हुन् ।
एनएचएस स्कटल्याण्डका चिफ एक्जुकेटिभ पल ग्रेले हालै ग्लास्गोमा आयोजित एक समारोहबीच प्रमुख अनुसन्धानकर्ता पौडेललाई अवार्ड प्रदान गरेका थिए । उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी फष्ट मिनिस्टर एवं ‘क्याबिनेट सेक्रेटरी फर फाइनान्स’ जोन स्वीने एमएसपीले विजेतालाई बधाई दिए ।
उक्त संयुक्त अनुसन्धानका लागि म्यारीवेल होमलेस् हेल्थ केयर सेन्टर एवरडिन र एवरडिन सिटी कम्युनिटी हेल्थ पार्टनरसीपका खोजकर्ताहरु प्राध्यापक डेरेक स्टेवार्ट, डा. केटी म्याकलुर, डा. क्यारोल बुखानन, लिज विल्सन् र जोन म्याक लियोड संलग्न थिए ।
प्रमुख अनुसन्धानकर्ता पौडेलले आफूहरुको अध्ययनले एवरडिनका घरवारबिहीन समुदायमा औषधि व्यवस्थापनका चुनौती र उनीहरुको स्वास्थ्य जोखिम एवं सेवा पहुँचमा भोगिरहेको समस्या उजागर गरेको बताए ।
उनीहरुको अनुसन्धानको विषय ‘होमलेस् प्यासेन्ट्स एण्ड दियर मेडिसिन्स, एक्सप्लोरिङ एक्सपेक्टेसन्स्, बिलिफ्स एण्ड बिहेवियर्स’ थियो ।
अध्ययनले एवरडिनस्थित घरवारबिहीन स्कटिसहरुले कसरी औषधोपचार गराइरहेका छन् भन्नेबारे दर्शाएको छ । घरवारबिहीनहरुलाई स्वास्थ सेवा प्रदायकसम्म पुग्न यातायात सुविधा अभाव र उनीहरुले औषधोपचार भन्दा बासस्थानमा बढी प्राथमिकता दिनुपरेको अध्ययनले उजागर गरेको छ ।
औषधि राख्ने उचित स्थान नहुँदा चोरी हुने वा हराउने र कतिपयले मोजामा राख्ने गरेको समेत अध्ययनमा पाइएको छ ।
अवार्ड ग्रहणपछि पौडेलले यस क्षेत्रमा थप अनुसन्धानका लागि प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्का खोजकर्ता एनएचएस ग्राम्पियनका लिड फार्मेसिस्ट जोन म्याक लोयडले आफूहरुको अनुसन्धान राष्टिय तहमा मूल्याङ्कन भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
पौडेलले सन् २०११ मा रोबर्ट गोर्डन युनिभर्सिटीबाटै विद्यावारिधी गरेका हुन् ।
उनी अहिले सोही विश्वविद्यालयमा फार्मेसी प्राक्टिस, स्कुल अफ फार्मेसी एण्ड लाइफ साइन्सेस्का प्राध्यापक छन् ।
EuropeNepal.Net: स्कटिसको अनुसन्धानमा नेपालीलाई अवार्ड